आर्थिक – Patrika Nepal
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहन गर्न थप क’डा कदम चालेको छ । सोमबार वाणिज्य र विकास बैंकहरुलाई नयाँ परिपत्र जारी गर्दै प्रतीतपत्र खोल्नुअघि नै तोकिएका वस्तुमा तोकिएको दरमा अनिवार्य नगद जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ नीतिगत प्रवन्ध गरेको हो । मुलुकको शोधनान्तर घाटा डेढ खर्ब नाघेपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडा नीति लिएको हो। अब केही बस्तुहरुको आयात गर्दा बैंकबाट ऋण लिन पाइँदैन। ब्यवसायीले जति परिमाणको बस्तु ल्याउने हो त्यसमा लाग्ने पैसा आफैले जम्मा गर्नु पर्छ। यसअघि बैंक ऋण लिएर उनीहरुले बस्तु आयात गर्न पाउँथे। राष्ट्र बैंकले गाडी आयातमा ५० प्रतिशत बैंक ऋण लिन पाउने सुविधा दिएको छ। तर केही अन्य बस्तुहरुमा एक रुपैयाँ पनि ऋण लिन पाइँदैन। जस्तो अब चिनी र चकलेट, ल्वाङ, मिनरल वाटर, म’दि’रा र भि’ना’ग’र, चु’रो’ट र सु’र्ति’ज’न्य ब’स्तु, अत्तर, क’स्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामानहरू,
यदि तपाईहरु सँग पनि यस्तो सिक्का छ भने हेर्नुहोस् करोडपति बन्न के गर्नुपर्छ ?
साथीहरू, तपाईंले देख्नु भएको होला कि पुराना र ऐतिहासिक चीजहरू राख्न धेरै मन पराउने मानिसहरू छन्। त्यति मात्र होइन, पुराना सामान राख्नको लागि उनीहरू प्रायः राम्रो मूल्य तिर्न तयार हुन्छन्। आज हामी केहि यस्ता ऐतिहासिक र पुरातन सिक्काको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौं जुन धेरैले सङ्कलन गर्छन्। एउटा सिक्काको मूल्य हजार वा लाख रुपैयाँमा हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैले कुनै पनि समय बर्बाद नगरी हामी तपाईंलाई यसको बारेमा पूर्ण जानकारी दिन्छौं। ऐतिहासिक सिक्काहरू मध्ये, केहि सिक्काहरू पनि छन् जुन पुरातन समयमा चाँदीबाट बनेका थिए। राजाहरू बाहेक धेरै सिक्काहरूमा युनिकर्न र अद्वितीय छविहरू बनाइएका थिए। यी सिक्काहरूको विशेषता यो हो कि यसले पुरातनताको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छ। यसमा 786 वा थप श्रृंखलाको सिक्काहरू समावेश छन्। यसबाहेक अङ्ग्रेजी र मुगल कालका सिक्का पनि निकै लोकप्रिय छन् । हेर्न
काठमाडौं : व्यवसायिक घराना लक्ष्मी ग्रुपले देशभित्रै स्टिल बिलेट उत्पादन गर्न २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। ग्रुपले नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका–६ मा बिलेट उत्पादन गर्न उद्योग विभागमा समृद्धि मेटालिक्स उद्योग दर्ता गरेको छ । लक्ष्मी ग्रुपले नवलपरासीमा सिद्धिलक्ष्मी उद्योगबाट ‘समृद्धि’ ब्रान्डमा टिएमटी डन्डी उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। भारतबाट तयारी बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउँदै आइरहेको ग्रुपले सरकारले बिलेट आयातमा उच्च कर बृद्धि गरेपछि स्वदेशमै उत्पा दन गर्न कस्सिएको हो । समृद्धि मेटालिक्स उद्योगको बार्षिक बिलेट उत्पादन क्षमता २ लाख २२ हजार मेट्रिक टन रहेको विभागले जनाएको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पञ्‍ज आइरन (कच्चा फलाम) आयातमा भन्सार हटाउँदै स्वदेशी उत्पादनमा अन्तःशुल्क नलाग्‍ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बिलेट आयातमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको अन्तःशुल्क बढ
६८ वर्ष पहिलेको २८ रुपैयाँ उधारो तिर्न अमेरिका बाट फर्केर आए ८५ वर्षका पूर्वसैनिक
६८ वर्ष पहिलेको २८ रुपैयाँ उधारो तिर्न अमेरिका बाट फर्केर आए ८५ वर्षका पूर्वसैनिक सेनाबाट अवकाश पाए पछि अमेरिकामा बस्ने छोरा कहाँ गएर बसेका एक जना सैनिक अमेरिका बाट फर्केर आए । उनी फर्केर आउनुको कारण थियो २८ रुपैयाँ उधारो तिर्नु । यो उधारो उनले ६८ वर्ष पहिले छोडेका थिए । आफू अमेरिका गए पनि आफूले तिर्नुपर्ने उधारो नबिर्सिएका यी पूर्व सैनिकले अहिले आएर २८ रुपैयाँ उधारोको सट्टा १० हजार रुपैयाँ तिरे । यो घ,टना भारतको हरियाणाको हिसार जिल्लाको हो । हरियाणामा प्रथम नौसेना बहादुरी पुरस्कार बाट सम्मानित नौसेना कमाण्डर बीएस उप्पल अवकाश पाए पछि आफ्ना छोरासँग अमेरिका गएर बस्न थालेका थिए । अहिले अमेरिका बाट फर्केर उनी हिसारको मोती बाजार स्थित दिल्लीवाला हलवाइकहाँ पुगे । त्यहाँ पसलका मालिक विनय बंसललाई भने ‘तिम्रा हजुरबुवा शम्भु दयाल बंसल लाई मैले १९५४ मा २८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो तर म अचानक सहर
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ । तोकेको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको छ । बेलायती पाउण्ड एकको खरिददर १५९ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ ३० पैसा रहेको छ ।यसैगरी युरो एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर १३४ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ७८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।कुन देशको मुद्राको दर कति ?
पत्रिका नेपाल - सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपिओ बाँडफाँट भएको छ। कम्पनीले साउन २० गतेदेखि २४ गतेसम्म निष्कासनमा ल्याएको सेयर शनिबार बाँडफाँट गरेको हो। कम्पनीको आइपीओ मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका अनुसार गोलाप्रथाबाट न्यूनतम १० कित्ताको दरले सेयर वितरण भएको हो। जसअनुसार ५ लाख ४० हजार जनाले मात्र गोलाप्रथामार्फत् १० कित्ताको दरले सेयर पाएका छन् भने साढे १७ लाख ६८ हजार १२२ जनाको हात खाली भएको छ। साउन २० गतेदेखि सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० रूपैयाँ दरले ६० करोड रूपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता आइपिओ विक्री खुला गरेको थियो। सानिमाको आइपिओमा २४ लाख १९ हजार ८४८ जनाको आवेदन परेको थियो। त्यसमध्ये २३ लाख ८ हजार १२२ योग्य आवेदन परेको थियो भने एक लाख ११ हजार ७२६ जनाको आवेदन रद्द भएका छन्। २०७४ मंसिरबाट यो कम्पनीले कारोब
असुरक्षित अफगानिस्तानमा सुरक्षा प्रदान गर्दै नेपाली गार्ड (489)
११ महिनादेखी ह’राएका मोदनाथ तिमल्सिनाका छोरा भेटिए यस्तो अबस्थामा(भिडियो हेर्नुस)
१.	सुर्खेतबाट आयो दुख लाग्दो खबर – एकै परीवारका चार जनाको मृत्यु (67)
२.	कुवेतमा क्रेनको ठक्करबाट एक नेपाली महिलाको मृ’त्यु । हार्दिक श्रद्धाञ्जली (63)
३.	छिटो–छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ? उसोभए आजैबाट यी खानेकुरा खान सुरु गर्नुहोस् (57)
४.	जापानमा एक नेपालीको मृ*त्यु ! मनमा अलिकति दया भए (R.I.P) लेख्नुहोस (57)
५.	आफ्नै श्रीमतीलाई मालिकसंग कोठामा ना’ ङ्गै भेटेपछि(भिडियो (56)
७.	काठमाडौंको कलंकीमा घट्यो डरलाग्दो घटना (55)